Budata Krisp maka Windows
Free Budata maka Windows (73.80 MB)
Krisp bụ mmemme ịkagbu mkpọtụ nke ndị ọrụ Windows PC nwere ike ibudata ma jiri nefu. Ọ bụ nnukwu mmemme ị nwere ike iji gbochie mkpọtụ dị nokirikiri ma kpochapụ ụda dị nokirikiri mgbe ị na-agbasa na nkata vidiyo, ịkpọ oku na YouTube, dị ka Skype, WhatsApp, Google Hangouts. Ọ bụkwa otu nime nhọrọ kacha mma maka ndị na-achọ mkpọtụ ịkagbu mmemme.
Mmemme ịkagbu mkpọtụ dị irè nke na-arụ ọrụ na igwe okwu ọ bụla, ọkà okwu, isi okwu, Krisp. Ọ bụ mmemme ị nwere ike iji belata mkpọtụ ụda na efu, ọkachasị mgbe ị na-akpọ oku vidiyo nèzí. Ọ bụrụ na ike gwụrụ gị ịchọ ebe dị jụụ iji kwuo okwu, ana m akwado mmemme a nke na-ebelata mkpọtụ ndabere. Site na ịpị bọtịnụ, ị nwere ike igbochi ma mkpọtụ na-abịa site naka gị na mkpọtụ na-abịa site na nke ọzọ. Usoro ihe omume ahụ, nke dị mfe iji, na-arụ nhazi ọdịyo na mpaghara, yabụ anaghị ebufe olu gị na ọdịyo site na ngwaọrụ ahụ na sava ahụ.
Site na ndị ọrụ karịrị 30 puku karịrị 200 mba, Krisp na-arịọ ma ndị ọrụ ma ndị ahịa. Usoro mkpọtụ mkpọtụ maka freelancers, ndị mbipụta akwụkwọ, ndị egwuregwu, ebe a na-akpọ oku, onye ọ bụla. Na-enweghị nbudata ihe omume ahụ, ịnwere ike ịnụ ka esi arụ ọrụ nke ọma site na https://krisp.ai/#action. Na-echezọghị, mmemme ahụ na-eji teknụzụ ọgụgụ isi nke na-agbanwe olu gị wee gbanwee oge.
Nha faịlụ: 73.80 MB
Mmepụta: 2Hz, Inc.